ADIGU XABASHIGA MAXAAD DHAANTAA?
Mustefe Guudoow Jimcale
Waxaan goob makhaayada ah ugu soo galay laba kooxood oo kala taageersan Suudi Yalaxoow iyo Qanyare xaga diidmada dowladnimadana isku baheysta. Raggaasi waxaa ay lahaayeen hogaamiye kooxeedyada Muqdisho waa niman amxaarada diidan balse wixii somali dan u ah ogol.
Maalin kadib ayaa balankii Qanyare ka baxay isaga oo ku eedeynaya in Dowlada ay u adeegto Xabashi, weligiisna uu xabashi u tanasuleyn, waxaana uu qanyare sheegtay in uu hubkiisa la tagayo meel kastaa cid uu aminayana ayan jirin.
Kooxdii Suudi ayaa arintaa ka carootay, waxaana ay jecleysteen in arinta Qanyare hubsiimo la gesho, lagana warsuga halka ay wax ku dhammaadaan. Sida lagu yaqaan taageerayaasha Qanyare waxaa ay toobinka saareen xabashi iyo wixii laga sugaaba in ay tahay dhibaato, waxaase ay aragtidaasi badashay shucuurkii raggii danwadaaga ahaa ee xukuumada somaliyeed meesha uga soo wada horjeestay.
Taageerayaashii Muse Sudi ayaa halmar afka furtay kalmadii ugu horeysay ay yiraahdeen ayaa aheyd Adiga xabashiga maxaad dhaantaa, Waxaana ay aheyd kalmadaasi ama noqotay Turning Point ay ka dhalato dood aad u fool xun, iyo gocasho xumaan hore u dhacday, iyo taariikho aaanan dhagaha la siin karin.
Taageera yaashii Suudi ayaa markiiba ku abtirsaday Cali Maxamed Gheedi, sheegayna in ay iyagu yihiin kuwo taladoodu cidna ayan ka hor imaan karin awoodna wax ku maquunin kara hadii loo baahdo, waxaana ay sheegeen in Qanyare uusan danaha somaliyeed hor istaagi karin.
Waxaa yaab igu noqotay qofka danaha ummada somaliyeed hortaagan qofka uu yahay, iyo waxa uu hortaagan yahay. Dadweynaha somaliyeed gaar ahaan weliba gaar ahaan shacabka muqdisho ku dhaqan waxaa ay kala garan la,yihiin danta guud iyo mida gaarka ah. Dowlad la'aanta waxaa ay la wadaagaan ummada somaliyeed, balse waxaa iyaga u dheer magaca caasimada oo ceeb iyo dulmi casimad u noqotay.
Ninka ku doodaya danaha somaliyeed baa la hortaagan yahay, waxaa ay ila tahay in uusan garaneyn danaha uu ka hadlayo, sababta oo ah waxa dhibku ku saaidka yahay waa isaga, waxa is ciilayana waa isaga, hadii uu runsheegyahay asagu dantiisa ha garto ileyn awood sare uga imaanesyo sida ciraaq ku dhacday oo kale ma jirto.
Waxaan soo xasuustay kalmadii Mudane Cabdulqadir yaxye uu ku tilmaamay somalida Muqdisho ku sugan oo aheyd in ay yeesheen dhaqan yaab leh oo cid uu ka suuroobo ayan jirin marka laga reebo duurjoogta.
Cabdulqadir yaxye Allaha u naxariistee waxaa uu sheegay in duurjoogu ay iska agtaagan tahay bahalkii shalay iyo maantaba laayay beri markuu gaajoodana usoo noqonaya, markuu dhargana agseexda, oo ay agtiisa daaqaan.
Arintaa waxaa ii xaqiijiyey ereybixinta cusub ee ah beelaha aanan hubeysneyn oo baryahay internetka buuxshay dhibka lagu hayo, cid u hiilineysa ma jirto kuwo ka hiiliyo mooyee, waana nasiib daro heysata kuwa taageero raga dhibkaa aanan ka hadleyn ee meelfog tooshka ku haya.